Hiran State - News: HS:-Wafti balaaran oo ka socda dowlada federalka oo ku soo wajahan Hiiraan.
HS:-Wafti balaaran oo ka socda dowlada federalka oo ku soo wajahan Hiiraan.
HS:- Wararka naga soo gaaraya caasimada Hiiraan ee Belet Weyne ayaa sheegaya in uu halkaasi ka socdo qaban qaabada soo dhaweynta wafti balaaran oo u hogaaminayo wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga.
Waftigan oo iskugu jira wasiiro, xildhibaano, waxgarad iyo aqoonyahano ka soo jeeda Hiiraan ayaa ujeedadoodu tahay sidii ay kulamo kala duwan ula yeelan lahaayeen masuuliyiinta dowlada kaka sugan Hiiraan, waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshoweynta Hiiraan.
Xaalada magaalada Belet weyne ayaa ah mid ka soo reeyneysa tan iyo markii dagaal faraha looga gubtay looga itaal roonaaday kooxda Shabaab dhamaadkii sanadkii tagay, sidoo kale dadaalo badan oo ka socda dal iyo dibad ayaa muujinaya in maalmaha inagu soo aadan ay Hiiraan gaari doonaan wafiyo kala duwan oo ka kala tagaya dibada kuwaasi oo ugu danbeyn gaari doona Hiiraan dhawaantan.
Sikasba Hiiraan ayaa u muuqata mid ay dadkeedu u tashanayaan iyadoona mustaqbalka dhaw lagu wado iney noqoto amaba laga hirgalindoono maamul goboleed ku yimid rabitaanka bulshoweynta Hiiraan kaasi oo ay taladiisa lahaan doonaan waxgaradka Hiiraan iyadoona la mideynayo dhamaan dhinacyada siyaasada marka uu soo gabo gaboobo shirka hada socda iyo kuwo lala sugayo masuuliyiinta iyo wax garad dhawantan gaari doono halkaas.
Siyaasadaha hada ka socda Hiiraan waxaa ku kala hari doona shaqsiyaadka u dhaqma qaab mooryaaneedka iyo inta aaminsan in Hiiraan loo helo nidaam iyo ka danbeyn oo dooneysa amaba ay daacad ka tahay xal u helida bulshada Hiiraan iyo Soomaaliweyn si ay Hiiran u noqoto degaan leh maamul goboleed xoogan oo ay dadku iyagu gacantooda ku dhisteen xiriir wanagsana la leh hadba dowladii jirta hadey noqon laheyd TFgda amaba mida rasmiga ah ee wadanka ka dhalan doonta.
Ma ahan markii ugu horeysay ee ay Hiiraan gaaraan wafti ka socda dowlada federalka ah, dhawantan ayey aheyd markii ay gaareen wafti uu hogaaminayey r/waaraha Soomaaliya iyagoona mudadii ay joogeen halkaasi kula kulmay waxgaradka, culimada, aqoonyahanda magaalada Belet Weyne oo ay marti ku ahayeen.
Guntii iyo gabo gabadii Hiiraan waxey ka mid tahay goobaha ay siweyn u dayaceen dadkooda iyo dowladahii soo maray dalka iyadoona dhinackasta lagala dagaalay maadama reer Hiiraan markasta aaminsanayeen in mar uun la heli doono dowlad adag taasi bedelkeediina waxaa dalka ka curtay dowlado is xig xiga oo midkasta ay eegeyso oo kaliya danta beelaha hadba markaasi siyaasada hor boodaya.
Marka laga soo tago waftiga berito imaan doona magaalada Belet weyne dad badan ayaa malinkasta maqla Dooxada Shabelle iyo Ahalusuna ayaa dagaalamay amaba Dooxadaa ciidamada dowlada kula dagaashay Hiiraan iyo wax la mid ah. runtii magaalada Belet Weyne waa nabad ciidanka Hiiraana waa isku ujeedo laakinse waxaa jira madaxa Dooxada Shabelle oo ay isagu siduu rabay noqon weysay kadib markii uu u heystay in ay shacabku ku taageerayaan magaca qaldan ee uu la baxay marka uu magaalada soo galo, taasi bedelkeeduna dadku inta laga helayo maamul adag oo ay reer Hiiraan dhistaan waxey u arkaan shaqsi ka mid ahaa ciidamadii soo halgamay marka maadaama ay shacabku u aqoon maamul jira oo ay reer Hiiraan dhisteen hooskiisa ayuu ka cararayaa oo mararka qaarkood si ula kac ah ayuu xabadaha u ridaa isagoo ula jeeda haley maqlooy.
Dad badan ayaa ku faraxsan siyaasaaha xawaaraha ku socda ee uu Hiiraan ka wado madaxa Dooxada Shabelle maadama ay dad badan qirsan yahiin amaba horey u qireen inuusan aheyn shaqsi awood u leh inuu reer Hiiraan hogaamiyo marka xaalada dhinackasta laga eego.hadey noqon laheyd isku soo dhaweynta reer Hiiraan. hadey noqon laheyd isku soo dhaweynta Soomaalida kale ee aan reer Hiiraanka aheyn.maadaama uu soo halgamay waa u qalmaa inuu dowlad goboleedka ay reer Hiiraan dhisan doonaan ka noqdo wasiir laakinse madaxweyne reer Hiiraan hogaamiya inuu noqdo madaxa Doxada Shabelle hada maahan waa 2020 iyo waxii ka danbeeyo.
Reer Hiiraan waxaa hogaamin kara amaba kasban kara shaqsi aragti fog oo isku wadi kara qofkii ka soo horjeeda iyo kii taageersan. reer Hiiraan waxaa hogaamin kara shaqsi ay dadku u siman yahiin. laakinse shaqsi leh sida Dooxada Shabelle ma aaminsani wax dowlad federal la yiraahdo.Cid aan talo ka dhageysnayo intaba uu hub gacanteyda ku jiro ma jirto siyasada in aan ku jirane waan doonayaa.
La soco wararkeena danbe iyo safarka waftiga.
· admin on January 21 2012 18:59:33 · 0 Comments · 1572 Reads ·
14,584,725 unique visits